Anyị ewughachila usoro nke saịtị maka ọtụtụ ndị ahịa anyị na WordPress, otu n'ime ihe ndị anyị na-anwa ime bụ ịhazi ozi ahụ nke ọma. Iji mee nke a, anyị na-achọkarị ịmepụta peeji nnabata ma tinye menu na-akpaghị aka depụta peeji niile dị n'okpuru ya. Ndepụta nke ibe ụmụaka, ma ọ bụ obere peeji. Na nwute, enweghị ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ebumpụta ụwa iji mee nke a n'ime WordPress, yabụ anyị mepụtara a WordPress Ndepụta Subpages shortcode igbakwunye na faili faili function.php isiokwu ndi ahịa.
content - Nke a bụ ọdịnaya egosiri n’ihu ndepụta enweghị usoro.